Ama-Micro-Moments kanye nohambo lwamakhasimende | Martech Zone
NgoMsombuluko, Agasti 24, 2015 NgoLwesine, Februwari 25, 2021 Douglas Karr
Imboni yezokumaketha eku-inthanethi iyaqhubeka nokwenza inqubekelaphambili ekuhlinzekeni ubuchwepheshe obusiza abathengisi ukuthi bakwazi ukubikezela nokuhlinzeka ngemephu yomgwaqo ukusiza abathengi kanye namabhizinisi aguquke. Senze imibono ethile kuze kube manje, noma kunjalo. Ingqikithi ejwayelekile yama-personas nama-funnels okuthengisa inesibindi futhi iguquguquke kakhulu kunalokho esake sakucabanga.
ICisco inikeze ucwaningo lokuthi umkhiqizo omaphakathi othengiwe unohambo lwamakhasimende oluhlukile olungaphezu kuka-800 oluholela kuwo. Cabanga ngezinqumo zakho zokuthenga nokuthi ugxuma kanjani phakathi kocwaningo, online, esitolo, i-imeyili, usesho, namanye amasu njengoba uqhubeka nomgwaqo oya esinqumweni. Akumangalisi ukuthi kungani Ochwepheshe bezentengiso nezokumaketha balwa nobunikazi kakhulu. Kungenye futhi isizathu sokuthi kungani ukumaketha kwesiteshi omni kufanele ihlelwe ngokucophelela ukuze ithuthukise imiphumela.
Uma ukwazi ukubikezela nokunikeza ukumaketha okwandulela uhambo lwekhasimende, unganciphisa ukungqubuzana futhi ubaholele ekuthengeni kahle. Eqinisweni, ucwaningo oluvela kwaCisco lukhombisa ukuthi abathengisi abanikezayo I-inthanethi Yakho Konke okuhlangenwe nakho ingabamba ukuthuthukiswa kwenzuzo okungamaphesenti ayi-15.6.
Hlanganisa lokhu okutholakele ne Cabanga Ngezinto Ezincane ze-Google ucwaningo futhi sisale nezikhathi ezincane ezi-4 okumele wonke umthengisi azinake:
Ngifuna ukwazi izikhathi - Abasebenzisi abangu-65% kubasebenzisi abakwi-inthanethi babheka imininingwane ethe xaxa online kuneminyaka embalwa edlule. Ama-66% wabasebenzisi be-smartphone babheka okuthile abakubonile kuthengiso lwethelevishini.
Ngifuna ukuhamba izikhathi - Ukwanda okungama-200% kosesho "eduze kwami" kuthi abasebenzisi be-smartphone abangama-82% basebenzise injini yokusesha ukufuna ibhizinisi lendawo.
Ngifuna ukwenza izikhathi - Abasebenzisi abangama-91% be-smartphone baphendukela kumafoni abo ukuthola imibono ngenkathi benza umsebenzi futhi ngaphezulu kwamahora ayizigidi eziyi-100 wokuqukethwe okuqukethwe kubukwe ku-YouTube kuze kube manje kulo nyaka.
Ngifuna ukuthenga izikhathi - Abasebenzisi be-smartphone abangama-82% babheka izingcingo zabo ngenkathi besesitolo benquma ukuthi bazothenga ini. Lokhu kuholele ekukhuleni okungama-29% kwamazinga okuguqulwa kwamaselula ngonyaka odlule.
Ngenkathi iGoogle igxile kumsebenzisi weselula, kufanele ubone ukuthi lokhu kuthinta kanjani lonke uhambo lwamakhasimende - kusuka ekuzuzweni kuya ku-upsell noma ekuvuseleleni nje. Iqiniso ukuthi kufanele sibe ngcono kakhulu ngokukhomba kokuqukethwe okushayela izikhathi zezinqumo zokuthenga. Faka abantu izitayela zokufunda futhi izinto ezikhuthaza ukuthenga futhi akumangazi ukuthi kungani abathengisi belwa kanzima nokukhiqiza okuqukethwe okuqhuba ukuguqulwa. I-Analytics ayinikeli ukuqonda ngalokhu futhi yingakho abathengisi bokuqukethwe bafuna ukwaziswa okwengeziwe izixazululo zokubikezela nokulinganisa ukusebenza kokuqukethwe kwabo.
Tags: isenzoCiscoUkukhangisa OkuqukethweukuguqulwaUkuhamba kwamakhasimendeNgifuna ukuthengaNgifuna ukwenzaNgifuna ukuhambaNgifuna ukwaziizikhathi ezincaneama-micromomentscabanga ngeGoogle